Waqtiyada Timeshiga - Ku rakib si aad u hesho sawirada dayax-gacmeedka taariikhda oo leh AutoCAD - Geofumadas
Waqtiyada Timeshiga - Ku rakib si aad u hesho sawirada taariikhda dayax-gacmeedka leh AutoCAD
Abriil, 2019 AutoCAD-AutoDesk
Waqtiga Timeshadu waa plugin aad u xiiso badan oo u oggolaanaya helitaanka sawirada dayax-gacmeedka taariikhda ah ee AutoCAD, taariikhaha kala duwan iyo qaraarada.
Qaadashada qaabka kumbuyuutarrada ee aan ku leeyahay laga soo dejiyey Google Earth, hadda waxaan rabaa inaan arko sawirada taariikheed ee aaggan.
1. Xulo meesha xiisaha leh.
Nidaamku waa mid fudud. Waxaad dooran kartaa Waqtiga Timeviews, ka dibna astaanta "View Imagery", gujinaya bartilmaameedka bartamaha aagga ee daneynaya oo kor u qaadaya guddi kaas oo sheegaya in hareeraha iskudhafka waxaa jira sawirro la heli karo taariikhaha qabashada kala duwan :
1 zoom image 19, oo leh pixel of centimeters 30,
1 zoom image 18, oo leh pixel of centimeters 60,
7 17 Sawirrada dhejiska, oo leh pixel of mitirka 1.20,
7 16 Sawirrada dhejiska, oo leh pixel of mitirka 2.30,
7 15 Sawirrada dhejiska, oo leh pixel of mitirka 4.60,
iyo 7 sawirro dhejis 14, oo leh pixel of 9.3a mitir,
Marka aan doorto 17 xalinta, ka dibna waxa ay i tuseysaa taariikhaha sawiradaas:
6 iyaga oo ka socda Airbus taariikhda July, November iyo December ee 2018, iyo ugu dambeyntii waa laba bilood ka hor (16 ee February 2019).
Waxa kale oo ay i tusaysaa in ay jirto DigitalGlobe ee July oo laga bilaabo 2017.
2. Muuji sawirka la soo xulay.
Marka sawirka la doorto Doorashadda View, waxaan arki karnaa sawirka xalinta iyo lakabka AutoCAD ee aan isticmaalno.
3. Ku dar taxane taariikheed.
Adigoo gujinaya "ku darida aragtiyada waqtiga" waxaan dooran karnaa sawirro ka soo jeeda isla goobta si aan isbarbardhigno.
3. Aqri sawirada.
Dhab ahaan codsiga waa mid aad u xiiso badan, maxaa yeelay waxay u ogolaataa in la eego sawirrada muuqaal ee aag iyo xitaa suurtagalnimada inay ka soo iibsadaan alaab-qeybiyaha. Waa in maskaxda lagu hayo in sawirada la heli karo aanay ahayn masax, laakiin taxanaha xargaha jilicsan oo leh qaar ka mid ah isku dhejinta. Sawirka soo socda ayaa muujinaya isku dhejinta udhexeysa labo 19 Zoom images iyo hal sawir oo ah 14 zoom in uu ku yaalo.
Adeegga weli lama heli karo, laakiin waxay noqon doontaa shaqeynta mudnaanta Plex.Earth Plugin for AutoCAD.
Guud ahaan, waxaan u arkaa mid aad u xiiso badan, oo leh fursado badan; Dhinaca gacan siinta macluumaadka laga heli karo aag gaar ah, samee is barbardhigga isbeddelada taariikheed. Kuwa ugu fiican, taas oo ka shaqaysa AutoCAD, xitaa marka la eego noocyada dhow; iyadoo aragti ah "software sida adeeg" sababtoo ah iyada oo aan iibsan sawirka, waxaad isticmaali kartaa sawirrada dayax-gacmeedka adigoo adeegsanaya adeegga Plex.Earth.
Marka la eego wanaajinta waxtarka isticmaalaya waa in la tusiyo sanduuqyada sanduuqyada ee la heli karo ee ku yaal aag la geeyey, halkii laga sii wadi lahaa; sida aad ka arki karto caymisyada Google Earth.
Post Previous«Previous Tallaabooyinka xadka ee Google Earth - oo ku jira tallaabooyinka 3
Post Next Bixinta - xalka adag GIS 2D iyo 3DNext »